Dos sy tsy tokony hatao amin'ny marketing amin'ny atiny | Martech Zone
Alatsinainy, Septambra 30, 2013 Talata, Oktobra 1, 2013 Douglas Karr
Aleo, ity ny chuckle-nao amin'ny tolakandro. mampiasa Meltwater Buzz, vao hitantsika ity sary tsotra sy tsara tarehy ity izay manome lisitra tsara momba ny entana izay mety tadiavin'ny olona iray ao an-tsaina rehefa mampivelatra ny paikadim-barotra momba ny varotra.
Ny iray amin'ireo lalàna mifehy ny fanaovana bilaogy dia Aza mamoaka bilaogy voasoratra ratsy. Nahita lahatsoratra ratsy be dia be aho (ivelan'ny lohahevitra, milaza ny heviny ho zava-misy, tsy misy dikany) izay mbola manana fitsipi-pitenenana sy tsipelina tsara, ka mino aho fa ny tian'izy ireo holazaina dia bilaogy tsy dia tsara soratra. Matetika no tsy dia voasoratra firy ny lahatsoratro… saingy mieritreritra aho fa mbola manana atiny sarobidy ho an'ny ankamaroany… ireo mpanao fitsipi-pitenenana havanana sy mpandika teny? Raha ny hevitro, ny lanjan'ireo atiny anao dia mibaiko ny fomba nanoratany azy. Izay fotsiny ny hevitro satria mitsentsitra fitsipi-pitenenana sy tsipelina aho na izany aza.
Raha toa aho ka manao ny fiheverana fa ny atiny rehetra dia tsy maintsy soratana miaraka amin'ny marina, dia mety manana olana lehibe amin'ity infographic ity aho. Ny infographic dia antsoina hoe ny Do's sy Dont an'ny Marketing amin'ny atiny. Na ny tsy fahalalako mafy ny teny anglisy aza dia nahatonga ahy hanao indroa amin'ny lohateny. Tsy tokony ho ilay Dos sy tsy tokony hatao amin'ny marketing amin'ny atiny?
1 Oktobra 2013 à 9:23
Torohevitra mahagaga Doug! Nofantsihanao indray.. Tena nisy namaky be fanazavana be.. Misaotra nizara!
3 Oktobra 2013 à 7:25
Hey Douglas, misaotra nizara. Tena infografika tena tsara izy io, misy toro-hevitra mahasoa maro. Tsy tsikaritro akory ny typo amin'ny lohateny, raha tsy efa namaky ny fanehoan-kevitrao tao amin'ny lahatsoratra 🙂 Ary marina ny anao, tokony ho "Dos".